Hilalao onja " Journey-Assist - ny momba ny fisafoana rehetra. Ny toerana tsara indrindra.
Pejy fandraisana » Ny karazana fitsangatsanganana » nilalao onja
Nilalao onja. Karazan-dranomasina
Hilalao onja! Angamba io no iray amin'ireo karazana fialamboly mahavariana indrindra! Ny fampifangaroana ny tantaram-pitiavana sy ny risika, ny fahatsapana firaisan-kina miaraka amin'ny singa mahery tsy misy fihetseham-po sy tsy manam-petra, fahatsapana fahalalahana sy tsy lanja, dia manintona mpankafy an'arivony an'arivony manana fo mafana sy be herim-po.
Tadidio fa fialamboly tafahoatra ity izay tsy milefitra amin'ny tsy fandraisana andraikitra ary tsy very maina foana fa an'ity fanatanjahantena folo mampidi-doza ity.
Ny tena firafitry ny onjam-pianarana dia avy amin'ny teny anglisy hilalao onja, izay midika ara-bakiteny hoe "mihodinkodina amin'ny tany."
Longboard - Mandidina amin'ny sambo lava
Ny longboard dia manana halavany 300cm eo ho eo. Mpisava lalana amin'ny surf izy. Ara-tantara dia nanomboka taminy daholo izany, ary miaraka aminy no anolorana ny vao manomboka ny fifankafizan'izy ireo amin'ny surf. Ny sakan'ny birao hatramin'ny 50cm, ny hatevin'ny 1cm. Miaraka amin'ny famindran-toerana toy izany dia milamina araka izay azo atao izy, ary mora ny misambotra na dia ny onja kely aza amin'ny longboard ary mianatra mahatsapa ny tabilao sy ny mizana. Longboarders dia miavaka amin'ny fomba milamina sy mitaingina. Na dia manana ny fahaiza-manao sahaza azy aza ny solaitrabe toy izany dia mahavita maneuvers maranitra mahavariana. Ary koa, ity tabilao ity dia tsara ho an'ny mitaingina onja malefaka, fa raha manana traikefa ampy dia afaka miaraka aminy amin'ny toe-javatra mafy kokoa izy io.
Shortboard - Sidina famafazana fohy
Ny zana-boaty fohy dia 180cm ny halavany. Ary izy angamba no karazana malaza amin'ny Internet-malaza. Mifanentana tsara amin'ny lozisialy isan-karazany. Ho toy ny fitsipika, manana vato be io izay ahafahanao manatanteraka maneuvers maranitra amin'ny faritra rehetra amin'ilay onja.
dia mifantoka solaitrabe bebe kokoa amin'ny ambaratonga fahaiza-manao sy amin'ny ambaratonga matihanina. Ho an'ireo vao manomboka, tsara kokoa ny tsy manandrana raha tsy te hilomano ny ankamaroan'ny fotoana mandry eo amin'ny solaitrabe fotsiny ianao.
Surf onja lehibe - Surf onja lehibe
Surf onja lehibe - Surf onja onja (avy amin'ny 6 metatra). Antsoina koa izy io Tau-surf (mi-surf-in surf). Ny halavan'ny sakan'ny solaitrabe ho an'ity karazana surf ity dia 280cm (antsoina hoe "Gan"). Mahaliana fa ny ski jet fitarihana indraindray dia miakatra amin'ny onja lehibe toy izany.
Ny fidinana onja amin'ny onja lehibe no karazana fivezivezena mampidi-doza indrindra, satria na dia latsaka tsara aza ny onja avo iray dia afaka miditra anaty rano hatrany amin'ny onja 6-15 metatra ny mpiondrana iray, ary 20 segondra monja no hainy hahalalana hoe aiza no misy ny tampony ary aiza ny ambany, ary midina eny ambonin'ny tany alohan'ny hamelezan'ny onja manaraka azy. Noho izany, mila karazana surf ity avy amin'ny tsinontsinona fahaiza-manao ambony indrindra sy ny traikefa.
Bodysurfboard - Bodyboarding
surf amin'ny toerana mora azo amin'ny takelaka malefaka fohy. Na dia azo entina amin'ny toerana semi-mijoro (squatting) na mijoro aza izy io. Ny surf amin'ny bodyboard dia fohy (matetika 100cm) ary manoeuvrable. Inoana fa ny bodyboarding no tsara raha te hahafantatra ny ranomasina, amin'ireo karazana onja, ary amin'ny ankapobeny "mahatsapa" an'ity orinasa ity. Eto, mazava ho azy, mora ampiasaina izy io ary ny zava-misy fa amin'ny dingana voalohany, ity karazana surf ity dia mora kokoa ny mifehy noho ny hafa rehetra. Amin'ny maha fitaovana azy ireo, matetika ny bodyboarders dia mampiasa wetsuit (raha mangatsiaka ny rano) sy vombony, izay ahafahan'izy ireo mahazo haingana ny ilaina hafainganam-pandeha hisamborana ny onja. Ho an'ireo vao teraka vao liana dia ity eto Misy ny fampahalalana momba ny boardboarding.
Bodysurfing - fitetezana vatana
Ny fitetezam-batana - ny filalaovana surf TSY MISY surf! Ny vatany manokana dia ampiasaina ho toy ny faritra planina. Raha atao teny hafa, dia mampiasa vatany ho toy ny tabilao :). Ary niaraka tamin'ny fitetezana vatana no nanombohany. Tamin'ny voalohany, ny olona dia nampiasa ny vatany hitaingenan'ny onja, ary avy eo nanapa-kevitra ny hampifanaraka takelaka sasany izy ireo :). Ary raha ny fanazavana, dia mahafinaritra be izany! Amin'ity karazana surf ity, ao amin'ny kalitao Fitaovana fanampiny, azonao atao ny mampiasa kiraro fohy amin'ny tongotrao sy ny fonon-tànana manokana (mitovy amin'ny takelaka kely 30-50 sm ny halavany) amin'ny tananao, izay ahafahana mampakatra ny lohanao. Noho ny fahafahany miditra sy mieboebo, io karazana fialamboly io dia malaza manerana an'izao tontolo izao.
Sapsurfing - mikoriana amin'ny zana-pahaizana manokana (SUP - banosy mijoro) raha mbola mijoro miaraka amin'ny lapana. Matetika, ny surfboards dia mitovy amin'ny takelaka tsy tapaka, fa mihoatra ny habeny ihany. Indraindray mahatratra 5-6 metatra.
Sapsurfing kosa dia mizara ho karazana maro:
Sur surf. Mivantana, onja onja mahazatra, fa paddle sy paddle board no ampiasaina.
Mitsangatsangana Ny fivezivezena mikoriana amin'ny fizahan-tany mikoriana amin'ny rano madio. Tena malaza eto an-tany.
Renirano fotsy any SUP. Fantsakam-bato amin'ny safira amin'ny renirano misamboaravoara. Mazava ho azy, mila fanomanana ara-batana tsara ianao, ary fitaovana mety foana.
SUP yoga / fahasalamana. Karazan-karazany hafa kely :). Miresaka asanas sy fanazaran-tena isan-karazany izahay, na singa matanjaka sy kardio vita amin'ny rano malama amin'ny takelaka. Hetsika mahafinaritra iray hampiharana ny fifantohana, ny fifandanjana ary ny fanamafisana ny vondrona hozatra rehetra.
Windserfing - fitsangatsanganana rivotra
Windserfing, midika takelaka iray (2 ka hatramin'ny 4.7 m lava) ary misy sambo kely apetraka eo amboniny. Raha ny tena izy dia modely tsotsotra amin'ny sambo mandeha sambo tsy misy familiana. Ny hetsika sy ny fifehezana ny rivotra toy izany dia amin'ny alàlan'ny fihodinana ny sambo sy ny birao.
Tsara homarihina fa ny rivo-piainana na dia ririnina aza, fa mampiasa ski na skateboard manokana kosa izy io, fa tsy ho solomaso no hidiran'ny ranomandry na lohasaha rakotry ny oram-panala. Ny zavatra hafa rehetra dia mitovy. Rivotra sy fahafahana :).
Amin'izao fotoana izao :). Ireto ambany ireto ny toerana fialokalofana lehibe eto amin'ny planetantsika, izay ahafahanao mitety onja tokoa!
Ny toerana tsara indrindra miserana. fiofanana
Nilalao onja. Kuta sy Seminyak, Bali, Indonezia
Bali dia noheverina ho iray amin'ireo toerana fitsangantsanganana tsara indrindra tsy any Azia ihany fa manerantany. Raha eo amin'ny sehatry ny manonofy momba ny fomba hianarana an'ity orinasa ity ianao dia tokony handeha any Kuta - toerana mety ho an'ny vao manomboka. Fasika fisaka fasika, tsy fisian'ny vato, potipoti-bato sy haran-dranomasina tanteraka. Tsy misy onja mahery sy mahery, ary ny ranomasina dia mifaly hatrany amin'ny onja misy onja ambany, izay mety indrindra hampiofanana.
Any amin'ny morontsirak'i Kuta, misy sekoly maro mpanao surf (misy koa ireo miteny Rosiana), izay ahafahanao mandray lesona manomboka amin'ny onja sy andiana kilasy mikendry valiny tena izy. Ny sandan'ny lesona iray amin'ny sekoly surf any Bali dia avy amin'ny $ 50, lesona fohy iray amin'ny lesona 3 dia vidin'ny $ 140, ny lesona dia mety ho an'ny tsirairay, angamba ao anatin'ny vondrona iray. Azonao atao ihany koa ny manofa mpanazatra manokana eny amoron-dranomasina - manomboka amin'ny $ 40 ka hatramin'ny $ 100 mandritra ny 2 ora.
Nilalao onja. Hikkaduwa, Sri Lanka
Ny morontsiraka fasika malefaka sy ny onja Hikkaduwa onja kely (1-3m) dia tsara ho an'ny mpanafika voalohany. Mazava ho azy, misy sekoly sy mpampianatra surf amin'ny sehatra rehetra momba ny fahaiza-manao.
Ny lesona fampidirana dia manomboka amin'ny $ 30. Làlam-pianarana 3-5, mitentina 90 $ hatramin'ny $ 150. Manomboka amin'ny $ 50 ny lesona ataon'ny tarika ho an'ny vao manomboka.
Misy ihany koa ny fotoana mety hidirana amin'ny tobin'ny surf, izay hipetrahana amin'ny mpanazatra mitovy saina sy efa za-draharaha, hanokana ny surf mandritra ny andro. Ny vidin'ny fiainana ao amin'ny toby dia manomboka amin'ny $ 700 isan-kerinandro. Ity vidiny ity dia misy koa ny sakafo sy fitsangatsanganana isan-karazany.
Nilalao onja. Phuket, Thailand
I Phuket dia mendrika azy ho toerana fitetezam-paritra tsara indrindra any Thailand. Manangona surfers an'arivony manana haavo isan-karazany isan-taona. Ho an'ny vao manomboka, ny morontsiraka tsara indrindra dia Kata sy Bong Tao. Ny rano madio madio sy madio tsara ary ny fidirana amin'ny ranomasina ary ny onja no mety indrindra amin'ny fianarana mikorisa.
Any akaikin'i Kata, misy fivarotana surf sy akanjo lava, club ary bara ho an'ny surf, matetika ny fifaninanana surf ary, mazava ho azy, misy sekoly sy toby fialofana izay ahafahanao mianatra milalao surf. Ny sandan'ny lesona amin'ny mpampianatra amin'ny $ 25 sy $ 25 dia ny manofa birao mandritra ny tontolo andro, ary raha mijanona mandritra ny iray volana ianao - $ 200, dia azonao ampiasaina mandritra ny 30 andro ny surf. Ny lesona amin'ny vondrona any amin'ny sekoly onja surf dia ho mora vidy kokoa - hatramin'ny $ 22.
Nilalao onja. Agadir, Marôka
I Maraoka dia heverina ho toerana tsara indrindra hisafoana aty Afrika Avaratra, ary isaky ny vanim-potoana dia feno mpiantsoroka avy any Eropa isaky ny ririnina, satria ny eto dia mora vidy sy haingana kokoa noho ny any Azia. Ny iray amin'ireo toerana tsara indrindra hisafidianana an'i Maraoka dia Agadir, noho ny morontsiraka sandy malefaka sy malefaka, faritra samihafa amin'ny alàlan'ny onja ary onja tena tsara.
Toerana tsara ho an'ireo vao manomboka ao amin'ny tanàna kelin'i Tagazut, any akaikin'i Agadir. Morontsiraka lehibe, tsy misy rivotra mahery sy onja mahery, be dia be ny sekoly sy toby fialofana. Ny vidin'ny herinandro ao an-toby - avy amin'ny € 420, 2 herinandro ao an-toby - avy amin'ny € 790. Ny vidiny dia misy ny famindrana, ny fampiantranoana, ny fitsangantsanganana ary ny fitsangatsanganana. Ny lesona fampidirana dia mitentina € 50, avy amin'ny lesona 3-5 € 35 isaky ny lesona, ary ny herinandro amin'ny lesona ho an'ny tsirairay dia 250 €.
Nilalao onja. Cape Town, Afrika atsimo
Cape Town, miorina ao amin'ny Repoblikan'i Afrika atsimo, dia manana morontsiraka tsara ho an'ny mpizaka. Ireo mpisitrika amin'ny ambaratonga rehetra dia afaka mahita zavatra hatao eto. Fa ho an'ny vao manomboka, ny morontsiraka mety indrindra dia Muisenberg. Misy morontsiraka fasika mihitsy, rano madio, tsy fisian'ny vato, vatohara, vatolampy ary rivotra mahery. Amin'izany toe-piainana any an-danitra izany dia tsy mahagaga raha be dia be ny toerana fitsangantsanganana. Ny morontsiraka iray manontolo dia miaina amin'ny fivezivezena, misy izany rehetra izany - sekoly, bara, fety, fifaninanana. Ny vidin'ny kilasy ho an'ny vao manomboka amin'ny vondrona iray dia manomboka amin'ny $ 25. Lesona ho an'ny tsirairay avy amin'ny $ 35. Matetika ny vidiny dia misy takelaka sy palitao.
Ary koa ao amin'ny Cape Town dia tena fahita windsurfing, ary manana toerana hianarana koa izy. Manomboka amin'ny $ 35 ny vidin'ny fampianarana
Nilalao onja. Java, Indonezia
G-land ao amin'ny nosy Indoneziana Java dia paradisa ho an'ny surf amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra. Manomboka amin'ny volana Mey ka hatramin'ny septambra dia misy rivotra mahery eto, ary ny bay mandritra io vanim-potoana io dia tian'ny matihanina, ary manomboka amin'ny Oktobra ka hatramin'ny Aprily, dia vanim-potoana tsara kokoa ho an'ny vao manomboka.
Morontsiraka fasika malama, rano madio, tsy misy vato. Mety amin'ny surf. Mazava ho azy, misy sekoly surf maro isaky ny tsiro sy teti-bola. Lesona manomboka amin'ny $ 45 ho an'ny iray, na $ 100 ho an'ny lesona telo. Ary koa, ity helo-drano iray manontolo ity dia tobin'ny mpandeha-dranomasina marobe. Ary azonao atao ny mandray fonosana serivisy feno, izay misy kilasy, fitsangatsanganana ary trano hipetrahana. Manomboka amin'ny 350 $ ny vidiny mandritra ny 3 andro amin'ny vanim-potoana ambany, ary amin'ny $ 550 amin'ny vanim-potoana avo.
Nilalao onja. Arugam Bay, Sri Lanka
Tsy i Hikkaduwa irery no toerana any Sri Lanka ahafahanao mivezivezy tsara. Tovovavy Arugam Bay dia tovovavy zatovo ahafahanao mivezivezy amin'ny onja tontolo andro ary manao fety amin'ny torapasika mitovy amin'ny hariva. Ny toeram-ponenana eto dia miompana amin'ny tanora kokoa, izany hoe tsy lafo ary tsy mitovy amin'ny fampiononana miharihary :). Ny toeram-pilokana any amin'ny Helodrano Arugam dia natao ho an'ny surf amin'ny ambaratonga fahaiza-manao rehetra.
Vidiny, lesona manokana avy amin'ny $ 35, amin'ny vondrona iray avy amin'ny 28 $. Misy ihany koa ireo sekoly miteny Rosiana misy kilasy manomboka amin'ny 45 $. Fanofana Surfboard manomboka amin'ny $ 10. Herinandro iainana ao amin'ny tobin'ny surf dia mitentina 550 $. Ahitana sakafo, fitsangantsanganana ary kilasy ny vidiny.
Nilalao onja. Lagos, Portugal
Afaka mirehareha amin'ny velaran-tany tsara ihany koa i Eoropa. Ohatra, ohatra, ny Lagos portogey mety ho toerana fisintonana tsara indrindra any Eoropa.
Tadidio fa tsy Azia velively io, ary ny rano (mandritra ny vanim-potoanan'ny surf amin'ny volana septambra ka hatramin'ny mey) dia milay eto (16-23g), noho izany manangona wetsuit. Ny fijanonana mandritra ny tapa-bolana miaraka amin'ny sakafo maraina dia handoa vola sahabo ho 1000 euro anao. Ny vidiny dia efa misy ny serivisy mpanazatra efa za-draharaha.
Ary aza adino ny mandehandeha eny an-tanàna ihany. Izy dia tsara tarehy sy mahazo aina 🙂
Ny toerana lehibe indrindra eo amin'ny tontolon'ny fitetezana onja! Honolulu! Tranon'ny Surfing! Toerana mahatalanjona. Eto aza ny lesona amin'ny surf dia tafiditra ao anatin'ny fandaharam-pianarana! Izay rehetra hitanao dia afaka mampianatra anao hanao surf. Manampia ilay rivo-piainana milamina tsy mampino ary fantatrao fa ao amin'ny paradisan'ny Surfer ianao :). Ny vanim-potoana eto dia toy ny paradisa, mandavantaona. Tsy mihena ny onja. Mila matahotra ny oram-baratra fotsiny ianao, fa mazava ho azy, afaka mianatra momba azy ireo mialoha amin'ny vinavinan'ny toetrandro.
Ny morontsiraka malaza indrindra ho an'ny vao manomboka dia Waikiki. Ny mpampianatra miteny rosianina dia mitentina 150 $ isaky ny lesona. Ao amin'ny vondrona, latsaky ny antsasaky ny vidiny. Ny trano fonenana ao amin'ny tobin'ny surf dia $ 200 isan'andro. Ny sarany dia misy kianja filalaovana onja, lesona iray ary famindrana.
Surfing Byron Bay, Aostralia
Byron Bay no toerana voalohany fitsidihan'ny surf any Aostralia. Ary io koa no toerana mety indrindra amin'ny "Barney" (antsoin'izy ireo hoe surfers vaovao any). Ny martsa ka hatramin'ny mey no fotoana mety indrindra handinihana ny torapasika tsy misy fiafarana.
Betsaka koa ireo sekoly manam-pahaizana manome serivisy tena tsara. Marihina fa misy toby natokana ho an'ny ankizy aza ahafahanao mandefa ny zanakao raha mianatra milalao surf ianao. Na izany aza, azonao atao ny mandefa ny zanakao hiofana ho surf. Gaga ianao rehefa mahita ny isan'ny ankizy eto amin'ny surf izay hikosoka ny orony ho an'ny dadato sy nenito lehibe :). Manampy fety amoron-dranomasina isan'andro ary ho azonao fa tsy ho leo ianao eto.
Torohevitra mahasoa ho an'ny mpandalina vao manomboka
Ny tena zava-dehibe ilainao dia fahasalamana ara-batana tena tsara! Voalohany indrindra, mba hahazoana ny fototry ny fikolokoloana ara-batana tsara ho an'ny fitsopiana, ny lesona amin'ny lomano ary ny fampiofanana ara-batana amin'ny ankapobeny. Fitrandrahana tsara, fehikibo soroka, famokarana hozatra, kardio tsara, tongotra ary maranitra. Ity no tena fototra mila ilainao.
Tena ilaina indrindra ny mampivelatra ny fahaiza-manao mahay mandanjalanja sy mifehy ny vatanao amin'ny toerana tsy milamina. Mandray anjara amin'ny fampandrosoana an'io fahaiza-manao io, ohatra, skate mahazatra. Na azonao atao ny mividy milina fanatanjahan-tena manokana - tabilao fifandanjana. Misy ny antsoina hoe s-board sy surf-skate, mitaingina izay, mandray anjara tsara amin'ny fahazoana ireo fahaiza-manao ilaina.
Raha ao amin'ny tropikaly ianao, dia aza hadinoina mampiasa sunscreen, satria azonao atao ny mahazo sunburn na dia ao anatin'ny toetrandro aza.
Rehefa miditra ao anaty rano dia asio ny tabilao mankany aoriana amin'ny oronao.
Aza misintona ny sola kely aorian'ny leash (tady mampifandray anao amin'ny solaitrabe), satria onja mahery iray dia afaka misintona ny birao ary manimba ny sandrinao na ny soroka.
Ataovy azo antoka fa hitazona elanelana tsy misy atiny amin'ireo mpanjifa akaiky anao.
Ny fitsipika tsy voatondro. Izay olona manakaiky ny onjan-doha indrindra no misy ny laharam-pahamehana.
Raha mandritra ny fisafosana ny rano ianao, dia voasaron'ny onjan-kafatra ianao (ny lalan-dresaka mankany amin'ny ranomasina misokatra), aza matahotra. Aza manandrana mifanandrana manohitra ny alàlan'ny ankehitriny, fa miezaha milomano sisin-dàlana hivoaka amin'ny riaka.
Raha nianjera ianao ka niditra tao ambanin'ny rano. Voalohany indrindra, alao moramora, hamonjy ôksizena io. mitambatra. Andraso ny onja mba hitsahatra tsy hanodikodina anao ary hitsingevana.
Mandrakotra, satrony ny lohanao. Aza hadino fa any amin'ny toerana ambonimbony any no mety ho birao.
Aza milomano tsy milomano eny amin'ny birao mivantana amin'ny moron-dranomasina, mety hanimba ny sotrin'ny zana-kazo sy ny birao ianao.
Aza milalao surf irery. Tsy maintsy misy olona hiantso vonjy, na hanampy anao raha sendra misy tsy mety amin'ny polo.
Ny fanentanana dia iray amin'ireo fanatanjahan-tena 20 mampidi-doza indrindra. Tandremo tsara! Ary enga anie ny hery ho anao :)!
Mahasoa sy mahaliana (video)